Golaha wasiirada oo ansixyey hindise sharciyeedka qeexaya qorista shaqaalaha shisheeyaha ah “Sawirro” – Radio Muqdisho
Shirka golaha wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo socday wax ka bdan toban saacadood, ayaa waxaa shir guddoominayey ku simaha Ra’iisul wasaaraha ahna wasiirka Destuurka Soomaaliya, Mudane Xuseen Maxamuud Sheekh Xuseen, iyadoo shirka diirradda lagu saaray arrimaha ciidammada tayeentooda, xaquuqdooda iyo dardargelinta amniga xasilinta dalka Soomaaliya, waxaana loogu yeeray shirka golaha taliyeyaasha ciidammada Qalabka Sida ee Soomaaliya.
Furitaanka Shirka, ayaa la dhageystay warbixinnada ammaanka ee ka yimid, wasaaradaha Amniga Gudaha iyo Gaashaandhigga, Soomaaliya, kuwaas oo la xiirray sida ay u socdaan diyaarinta howlaha sugidda iyo xasilinta ammaanka Qaranka Soomaaliya.
Taliyaha hey’adda NISA, abaanbuulaha ciidamamda ahna taliye ku xigeenka Ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed, iyo taliye ku xigeenka Ciidammada Booliska Soomaaliyeed, ayaa shirka keenay war-bixinno loo diray oo ku saabsan, habka wada shaqeynta ciidamada Qaranka, baahinda iyo xoojinta taakuleyta ay u baahan yihiin, waana arrinta qaadatay doodda ugu dheer ee shirka golaha wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya.
Afhayeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa warbaahinta Qaranka u sheegay in natiijooyin wax ku awl ah ka soo baxdey doodda arrimaha ammaanka iyo ciidammada quseeyey ee golaha wasiirrada Soomaaliya ay yeesheen.
Dhinaca kale, golaha wasiirrada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa meel-mariyey Hindise-sharciyeedka Shaqaalaha Ajaanibta ah, kaas oo xadeynaya xaquuqda ay dalka ku yeeliyiin iyo kuwa lagu leeyahay shaqaalaha Ajaanibt, iyadoo waxyaabaha ugu muhiimsan Hindeysehaasina uu yahay in shaqaale Ajaanib ah uusan qabin Karin shaqooyinka ugu muhiimsan dalka.
Golaha wasiirrada Soomaaliya ayaa weli ku gudaha jira ka doodista Hinde-sharciyeedyo badan oo ku aaddan arrimaha ugu muhiimsan hiigsiga Soomaaliya ee la xiriira gaarista ujeedooyinka dimoqoraadiyadeed ee doorashinka Soomaaliya 20156-ka, sida xasilinta iyo xoreynta deegaannada ay nabad-diidku haraadiga ku yihiin iyo soo nooleynta dowlad wanaagga Soomaaliya.